Owu na -eso di na nwunye | Bezzia
Maria José Roldan | 13/10/2021 22:19 | Mmekọrịta
N'ezie, ị nụla ihe karịrị otu ugboro maka ahịrịokwu: "Ọ ka mma ịnọ naanị gị karịa gị na ndị ọjọọ nọ". Ọ bụ ihe nwute, ọtụtụ mmadụ na -ahọrọ ịnọ na mmekọrịta na -egbu egbu, iji zere ịnọ naanị ha na ndụ. Ihe owuwu ama ama ama ama ama na-adịkarị karịa ọtụtụ mmadụ nwere ike iche na mbụ.
Ọ dịghị ihe na -eme maka enweghị onye mmekọ ebe ọ ka mma ịnọ naanị gị karịa ịnọ na mmekọrịta na -adịghị mma, na ọ nweghị ọdịnihu na ọ ga -adarịrị ọdịda.
1 Ịnọ n'alụghị di ma ọ bụ nwunye bụ nhọrọ ndụ zuru oke
2 Nnukwu ihe efu nke owu ọmụma so
3 Mmebi mmetụta uche nke owu ọmụma so
Ịnọ n'alụghị di ma ọ bụ nwunye bụ nhọrọ ndụ zuru oke
Dị ka ọ na -eme mgbe ị nwere onye mmekọ, n'alụghị di ma ọ bụ nwunye bụ ezigbo nhọrọ ndụ. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ka gị na onye ọzọ nwee mmekọrịta nke ịhụnanya pụtara ìhè site na enweghị ya na nsí dị n'ehihie. Ọtụtụ ndị di na nwunye nke oge a na -ada n'ihi na enweghị ezigbo ịhụnanya maka nnọkọ oriri na ọ andụ andụ a na -etolite n'ihi oke ntụkwasị obi mmetụta uche na ọchịchọ ịghara ịnọ naanị gị na ndụ.
Nnukwu ihe efu nke owu ọmụma so
Owu ọmụma so ya na -ebute onye na -enwe ya nnukwu oghere. Ị nwere ike ime ka di na nwunye ahụ dịrị nso site n'echiche nke anụ ahụ mana na mmetụta uche, ihe efu dị ezigbo mkpa. Enwere usoro ihe ma ọ bụ eziokwu nke nwere ike igosi na mmadụ na -enwe owu ọmụma so n'ime di na nwunye ahụ:
Di na nwunye anaghị ege ya ntị, nke na -afụ ụfụ nke ukwuu.
Enwere enweghị mmasị maka ebumnuche ma ọ bụ nrọ enwere ike nke di na nwunye ga -eme.
Ndị merụrụ ahụ na -ama ikpe mgbe niile maka ihe niile na enweghị nkwukọrịta mgbe a bịara n'ịgwọ nsogbu dị iche iche na -ebilite n'ime di na nwunye ahụ.
Ihe ịrịba ama ndị a na -egosi na di na nwunye ahụ abụghị ihe a na -achọsi ike nakwa na owu ọmụma so na mbụ e birila n'ime ha. Ọ baghị uru ịta ahụhụ naanị ka gị na onye gị na ya na -akpakọrịta, ọ kakwara mma ịnọ naanị gị. Inwe mmekọrịta ga -abụrịrị ihe abụọ ma ga -abụrịrị ntinye aka na mmadụ abụọ ahụ.
Mmebi mmetụta uche nke owu ọmụma so
Mmekọrịta na -egbu egbu adịghị mma maka onye ọ bụla na ọ nwere ike bute onye na -arịa ya nnukwu mbibi mmetụta uche. Inwe onye mmekọ na inwe mmetụta owu ọmụma bụ ihe ekwesighi ka ekwenye ebe ọnya mmetụta uche nke ọnọdụ dị otu a dị ezigbo mkpa. N'iburu nke a, ọ kacha mma ịkwụsị mmekọrịta a ozugbo enwere ike wee gbalịa wughachi ndụ, naanị ya ma ọ bụ ya na onye ọzọ na -eme ka di na nwunye ahụ nwee ahụ ike.
Na nkenke, ọ dịghị mkpa inwe onye mmekọ ma ọ bụ ịnọnyere mmadụ maka eziokwu dị mfe nke ịgbapụ owu ọmụma. E nwere oge na n'agbanyeghị inwe mmekọrịta ụfọdụ, onye ahụ ka nọ naanị ya. Nke a bụ ihe a maara dị ka owu ọmụma so ya na na mmekọrịta a ọ nweghị ihe ịhụnanya ma ọ bụ mmetụta ịhụnanya, ihe dị mkpa maka di na nwunye ịrụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Owu na -eso di na nwunye ahụ
Chọpụta atụmatụ mgbụsị akwụkwọ oyi nke iche echiche Mu